Y.B.S နဲ့ ခရီးသွားလာ​နေကြတဲ့ ပြည်​သူများသတိထားနိုင်ရန် ​ဆေး​ကျောင်းသူ​လေးကို နှိုက်​သွားတဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက် - TheeSayChin
Y.B.S နဲ့ ခရီးသွားလာ​နေကြတဲ့ ပြည်​သူများသတိထားနိုင်ရန် ​ဆေး​ကျောင်းသူ​လေးကို နှိုက်​သွားတဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက်
ထပ်​တင်​​ပေးပါဦးမယ်​ Y.B.S နဲ့ ခရီးသွားလာ​နေကြတဲ့ ပြည်​သူများ ကား​ပေါ်​ရောက်​ရင်​ မိမိတုိ့ရဲ့ အဖိုးတန်​ပစ္စည်းများ ထည့်​ထားတဲ့ လွယ်​အိတ်​ စလင်းဘက်​အိတ်​များကို ​ရှေ့သို့ သိမ်းပြီး လွယ်​ပါ ကိုင်​ထားပါ …. ။
​တွေးချင်​ရာ​တွေး ​ငေးချင်​ရာ ​ငေးမ​နေကြပါနဲ့ နော် … ဒီကား​ပေါ်မှာ နှိုက်​သွားတဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက်​ ​တွေဟာ ကျွန်​​တော်​ပထမ​နေ့တင်​ထားတဲ့ ​ဆေး​ကျောင်းသူ​လေးကို နှိုက်​သွားတဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက် ပါပဲ ဒီတစ်​​ခေါက်​ သူတို့ရဲ့ သား​ကောင်​ဖြစ်​သွားသူက ​တော့ ဗိုလ်​ကြီးမိန်းမ ပါ အပြာ​ရောင်​ ဂျက်​ကက်​ ဆံပင်​ bob cut နဲ့ ညီမငယ်​ပါ … ။
အင်္ကျီငါးပိ​ရောင်​ ကတုံးဆံ​ထောက်​နဲ့ ခါးပိုက်​နှိုက်​ က အိတ်​နဲ့ကွယ်​ ​ပေးပါတယ် …. ။ လက်​၀ဲဘက်​ တက်​တူး ရှပ်​အင်္ကျီအဖြူ နဲ့ ချာတိတ်​က နှိုက်​ပါတယ်​ သူတို့ နှိုက်​မယ့်​ သား​ကောင်​ကို ​တွေ့ရင်​ ​ခေါင်းကုတ်​ ပြီး​တော့ အချင်းချင်း အချက်​ပြပါတယ်​ …. ။ နှိုက်​ပြီးသွားတာနဲ့ မျက်​နှာကို သပ်​ ပြီး အချက်​​ပေးပါတယ်​ ချက်​ချင်း လူခွဲ ပြီး အဆင်းပေါက်​ဘက်​ကို ​ရွှေ့တာတွေ့ရပါတယ် … ။
ခုလိုဖြစ်​စဉ်​​လေး​တွေ တင်​ပြ​ပေး​နေတာ ခရီးသွားပြည်သူ​တွေ အသိ သတိ ရှိ​စေချင်​လို့ ပါ ခုချိန်​ထိ ပြည်​သူ့ရဲ ​တွေရဲ့ ထိ​ရောက်​တဲ့ ၀န်​​ဆောင်​မှု အားရစရာမရှိပါ …. မြန်​မာပြည်​မှာ လူဖြစ်​လာကြတဲ့ ခရီးသည်​များ ကိုယ့်​အားကိုယ်​ကိုး ကိုယ့်​အန္တရာယ်​ကိုယ်​ကာကွယ်​ကြဘာလို့:-D
Ko Aung Kawlin///Lwin Oo
Y.B.S နဲ့ ခရီးသှားလာ​နကွေတဲ့ ပွညျ​သူမြားသတိထားနိုငျရနျ ​ဆေး​ကြောငျးသူ​လေးကို နှိုကျ​သှားတဲ့ ခါးပိုကျ​နှိုကျ
ထပျ​တငျ​​ပေးပါဦးမယျ​ Y.B.S နဲ့ ခရီးသှားလာ​နကွေတဲ့ ပွညျ​သူမြား ကား​ပျေါ​ရောကျ​ရငျ​ မိမိတို့ရဲ့ အဖိုးတနျ​ပစ်စညျးမြား ထညျ့​ထားတဲ့ လှယျ​အိတျ​ စလငျးဘကျ​အိတျ​မြားကို ​ရှသေို့ သိမျးပွီး လှယျ​ပါ ကိုငျ​ထားပါ …. ။
​တှေးခငျြ​ရာ​တှေး ​ငေးခငျြ​ရာ ​ငေးမ​နကွေပါနဲ့ နျော … ဒီကား​ပျေါမှာ နှိုကျ​သှားတဲ့ ခါးပိုကျ​နှိုကျ​ ​တှဟော ကြှနျ​​တျော​ပထမ​နတေ့ငျ​ထားတဲ့ ​ဆေး​ကြောငျးသူ​လေးကို နှိုကျ​သှားတဲ့ ခါးပိုကျ​နှိုကျ ပါပဲ ဒီတဈ​​ခေါကျ​ သူတို့ရဲ့ သား​ကောငျ​ဖွဈ​သှားသူက ​တော့ ဗိုလျ​ကွီးမိနျးမ ပါ အပွာ​ရောငျ​ ဂကျြ​ကကျ​ ဆံပငျ​ bob cut နဲ့ ညီမငယျ​ပါ … ။
အင်ျကြီငါးပိ​ရောငျ​ ကတုံးဆံ​ထောကျ​နဲ့ ခါးပိုကျ​နှိုကျ​ က အိတျ​နဲ့ကှယျ​ ​ပေးပါတယျ …. ။ လကျ​ဝဲဘကျ​ တကျ​တူး ရှပျ​အင်ျကြီအဖွူ နဲ့ ခြာတိတျ​က နှိုကျ​ပါတယျ​ သူတို့ နှိုကျ​မယျ့​ သား​ကောငျ​ကို ​တှရေ့ငျ​ ​ခေါငျးကုတျ​ ပွီး​တော့ အခငျြးခငျြး အခကျြ​ပွပါတယျ​ …. ။ နှိုကျ​ပွီးသှားတာနဲ့ မကျြ​နှာကို သပျ​ ပွီး အခကျြ​​ပေးပါတယျ​ ခကျြ​ခငျြး လူခှဲ ပွီး အဆငျးပေါကျ​ဘကျ​ကို ​ရှတေ့ာတှရေ့ပါတယျ … ။
ခုလိုဖွဈ​စဉျ​​လေး​တှေ တငျ​ပွ​ပေး​နတော ခရီးသှားပွညျသူ​တှေ အသိ သတိ ရှိ​စခေငျြ​လို့ ပါ ခုခြိနျ​ထိ ပွညျ​သူ့ရဲ ​တှရေဲ့ ထိ​ရောကျ​တဲ့ ဝနျ​​ဆောငျ​မှု အားရစရာမရှိပါ …. မွနျ​မာပွညျ​မှာ လူဖွဈ​လာကွတဲ့ ခရီးသညျ​မြား ကိုယျ့​အားကိုယျ​ကိုး ကိုယျ့​အန်တရာယျ​ကိုယျ​ကာကှယျ​ကွဘာလို့:-D
← ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအယာလေးတွေနဲ့ Mirror Selfie ရိုက်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ရွှန်းလက်
Gym ကစားရင်း သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဟန်​နာယူရီ →
July 5, 2019 Min Yar Zar 0
” သမီးလေး Victoria အတွက် တောင်းပန်စာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Wisdom Hill “ …
(၅)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင်ထွက်ပေါ် …